विवाहेत्तर सम्बन्धबाट यसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ ! :: साझावोली न्यूज :: विवाहेत्तर सम्बन्धबाट यसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ !
विवाहेत्तर सम्बन्धबाट यसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ !
मंगलबार, जेठ २४, २०७९ साझावोली न्यूज
विवाहलाई पवित्र नाता मानिन्छ । विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि एकअर्काले सुखदुःखमा मात्रै नभई जिन्दगीभर साथ दिने वाचा-कसम खाएका हुन्छन् । यसरी गरिएको वाचा र जोडिएको विश्वास कायम राख्न दुवैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विवाह सम्बन्धमा बाँधिइसकेकाहरुले विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नु राम्रो मानिंदैन । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण दम्पतीबीच दरार पैदा गर्छ ।
यदि तपाईं विवाहेत्तर सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने त्यसबाट बाहिर निस्किनुस् र घरपरिवारको सम्बन्ध बलियो र दिगो बनाउनुस् ।
विवाहेत्तर सम्बन्धबाट बाहिर निस्किनु सामान्य कुरा भने होइन । तर यसबाट बाहिर निस्किन सकियो भने परिवारको खुसी र उमंग फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । यदि तपाईं विवाहेत्तर सम्बन्धबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने यी पाँच उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
के हो विवाहेत्तर सम्बन्ध ?
श्रीमान श्रीमतीभन्दा बाहिर सम्बन्ध राख्नुलाई विवाहेत्तर सम्बन्ध भनिन्छ । जब कुनै महिला वा पुरुषले जीवनसाथीबाहेक अरुसँग शारीरिक तथा मानसिक सम्बन्ध बनाउँछन् भने त्यसलाई विवाहेत्तर सम्बन्ध भनिन्छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नुमा दम्पतीबीच राम्रो सम्बन्ध नहुनु, एकअर्काप्रति विश्वास नहुनु, जबरजस्ती विवाह गरिदिनु, निकै व्यस्त दैनिकी हुनु र दम्पती एकअर्काबाट टाढा रहनु जस्ता कुरा मुख्य कारक हुन्छन् ।
पार्टनरसँग कुरा गर्ने
विवाहेत्तर सम्बन्धले दुई जनाबीचको सम्बन्धमा मात्रै दरार पैदा गर्दैन । यसले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई नै तनाव दिन्छ । तनाव मात्रै होइन, यस्तो सम्बन्धले कतिपय जोडीलाई सम्बन्धविच्छेदसम्म पुर्‍याउँछ ।
यस्तो अवस्थामा दुवैले मनको कुरा खुलेर व्यक्त गर्नुपर्छ । एकअर्काले विश्वास र इमान्दारिता कायम राख्नुपर्छ । आफूले कुन अवस्थामा र किन अरुसँग सम्बन्ध गाँसेको हो, त्यसबारे पनि खुलेर कुरा गर्नुपर्छ । फेरि यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्द गर्ने
विवाहेत्तर सम्बन्धले म र मेरो परिवारको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि वा महसुस भएपछि त्यसबाट टाढा रहनुपर्छ । त्यस्तो सम्बन्धमा रहेको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न नै छाड्नुपर्छ ।
सम्पर्कबाट टाढा रहँदा आफूसँग सम्बन्धमा रहेकालाई भने सूचना दिन आवश्यक हुन्छ । कारण पछि कुनै तनाव र झमेला नहोस् ।
पार्टनरसँग समय बिताउने
यदि सुमधुर वैवाहिक सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने पार्टनरलाई बढीभन्दा बढी समय दिनुपर्छ । यदि तपाईं विवाहेत्तर सम्बन्धबाट पार पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पछि छाडेर आएका सबै कुरा पार्टनरसँग दोहोर्‍याउनुपर्छ । यसमा आफूले गरेका कमीकमजोरी तथा गल्ती स्वीकार गर्नैपर्छ ।
बाहिरी सम्बन्धका कारण सम्बन्धमा मनमुटाव भए पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी आफ्ना प्राथमिकता तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
विवाहबारे खुलेर कुरा गर्ने
विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहेका अधिकांशले आफ्नो वैवाहिक जीवनबारे धेरै कुरा लुकाएका हुन्छन् । सकेसम्म उनीहरु विवाह नै नगरेको बताउँछन् । थाहा पाइहाले पनि त्यसबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् ।
यदि तपाईं विवाहेत्तर सम्बन्धबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो वैवाहिक जीवनबारे खुलेर कुरा गर्नुपर्छ र विवाहको महत्व बुझ्नुपर्छ ।
विज्ञको सहयोग लिने
विवाहेत्तर सम्बन्धबाट बाहिर आउनका लागि विज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । हरेक विषयमा विषय विज्ञ भए जसरी विवाह विज्ञ पनि हुन्छन् । आफ्नो अवैध सम्बन्ध र कारणबारे विज्ञलाई खुलेर बताउँदा केही समाधान निस्किन्छ । यस्तो गर्दा विवाहेत्तर सम्बन्धबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । र यसले तपाईं र परिवारको खुसी फर्काउन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २४, २०७९ १४:५८